वडा अध्यक्षमा उठ्ने पत्रकार न्यौपानेको घोषणा – मोफसल खबर
Home जिल्ला समाचार, समाचार वडा अध्यक्षमा उठ्ने पत्रकार न्यौपानेको घोषणा
वडा अध्यक्षमा उठ्ने पत्रकार न्यौपानेको घोषणा
Posted on २०७८, १६ चैत्र बुधबार १५:१३
पत्रकार चन्द्रकान्त न्यौपाने कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ४ को वडा अध्यक्ष पदमा उठ्नु हुने भएको छ । सामुदायिक रेडियो मायादेवीका स्टेसन म्यानेजरका रुपमा रहनु भएका न्यौपानेले आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको लागि स्वतन्त्रतर्फबाट वडाध्यक्षमा उठ्ने घोषणा गर्नु भएको हो ।
आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमा एक सन्देश लेख्दै उहाँले शिक्षित युवा समाज विकासमा सहभागि हुनुको विकल्प नभएको बताउनु भयो ।
उहाँ लेख्नुहुन्छ ‘वैशाख ३०, २०७९ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको लागि कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ४ को लागि ३स्वतन्त्रतर्फबाट वडा अध्यक्ष पदमा उठ्ने घोषणा गर्दछु। यसपछाडीका कारण, योजना तथा रणनीतिबारे प्रचारात्मक अभियानको क्रममा विस्तारै वडा तथा नगरबासीमा अवगत गराउँदै जाने छु। मेरो उम्मेदवारी कमिसनतन्त्र र भ्रष्टाचारको न्यूनिकरण, स्मार्ट विकास र शुशासनयुक्त प्रशासनिक सेवा प्रवाहको लागि हुनेछ। मेरो उम्मेदवारीको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सम्पूर्ण युवाप्रतिनिधित्व र विकासमा युवा सहभागिता पनि हो। यहाँ सबैबाट साथ, सहयोग, सुझाव र मार्गदर्शन प्राप्त गर्न पाउने छु भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्दछु। आज नगरे, कहिले गर्ने? युवाले नगरे, कसले गर्ने? धन्यबाद।’
कपिलवस्तुसंगै बुटवल र काठमाण्डौँका राष्ट्रिय संचारमाध्यम (रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन ) मा लामो समयय पत्रकारिता गरिरहनु भएका न्यौँपानेले शिक्षित र उर्जाशिल युवालाई नेतृत्वमा पुग्ने मौका दिइए समाज परिवर्तन गर्न सकिने बताउनु भयो । वडा नम्बर ४ न्यौपानेको प्रभाव क्षेत्र हो । उहाँको घर पनि वडा नम्बर ४ झुँगामा पर्दछ । न्यौपाने पत्रकारितासंगै बिभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा रही सामाजिक र मानवीय कार्यमासमेत अग्रसर हुनुहुन्छ ।